Nhau - LIVE SHOW YEMAHARA DIAMOND TOOLS KUZIVISA PAMWE 9TH, MARCH
LIVE RATIDZA ZVITSVA DIAMOND TOOLS KUVhura PA 9TH, MARCH
Mhoroi, munhu wese, heino Fuzhou Bontai Diamond Zvishandiso Co; Ltd muChina, nyanzvi yedhaimani maturusi ekugadzira ane anopfuura makore makumi matatu ezviitiko.
Zvakanaka kucherechedza kuti tichava nemutambo wekuratidzira papuratifomu yeAlibaba musi wa9, Kurume (Beijing Nguva), ichi ndicho chiratidzo chekutanga chehupenyu chatinobata mushure mekunge tadzokera kubasa mushure meZororo reMutambo weZororo gore rino.
Munguva yepamoyo show, isu tichavhura maturusi matsva edhaimani, Pazasi pane chikuru chigadzirwa chatinosuma, chinonzi "Z" diamond cup vhiri, iyo yakagamuchira yazvino tekinoroji-yekudzivirira kutenderera. Iko kushandiswa kweiyi tekinoroji mune yedu madhaimani maturusi indasitiri haisi poular izvozvi, chete mamwe makuru emabhizimusi emabhizimusi, semuenzaniso Husqvarna akatoishandisa kare. Ichi chikamu chechimiro zvakare chiri chitsva chakavhurwa modhi, chakasarudzika mumusika. Resistance Welding inocherekedza zvakanyanya kuomarara zvinodiwa pakuenderana kwemhando yezvikamu, izvi zvinoita kuti ive nemhando yepamusoro. Kana isu tichiwisira zvikamu pamuviri, inopenya pakati payo, munharaunda inogadzira kupisa, izvi hazvigone kudziisa zvikamu uye nekuparadza chimiro chayo, saka zvinogonesa iro vhiri remukombe kuva nehupenyu hwakareba hwekushanda uye hune hasha kupfuura makapu mavhirichinoitwa dzakakwirira Frequency nomoto michina. Chechitatu, ine simba rekusimbisa iri nani, iyo inodzivirira zvikamu zvacho kuti zvisaburuke nyore nyore paunenge uchikuya. Forth, Resistance Welding haizosiyi kuwacha chiratidzo uye mitsetse yekutungidza iri diki, saka inotaridzika kuva yakanaka kupfuura yakajairika makapu mavhiri.
Becides, isu tinosarudza mamwe mamodheru akasarudzika madhaimani maturusi ekutengesa panguva yedu yekurarama show, iyo inogona kunakidzwa nemahombekombe makuru. Yekutanga ndeye 3 ″ mangoda vachikuya disc, inoshandiswa zvakanyanya kune akawanda maChinese mabara epasi ekugaya, senge ASL, XINGYI, RONLON, MERROCK, TUOMEI nezvimwewo imwe modhi ndeye 3 ”torx yakaoma polishing mapedhi, yakaoma yakashandiswa pakukudza kongiri, terazzo pasi, ine hupenyu hwakareba, kupinza uye kupenya, pamwe nemutengo-unoshanda.